Misy fomba vitsivitsy izay ahafahanao manampy amin'ny fampandrosoana ity pejy ity
Tsioka lisitra: Miasa hatrany amin'ny angon-drakitra aho. Raha toa ka manana fanitsiana na fanampiana ianao amin'ny fanaovana lisitra efa misy, na lisitry ny lisitry ny faritra vaovao izay tsy voarakitra dia tiako ny hihaino anao.
Datafom-piainana momba ny fiainana: Ny iray amin'ny fanampim-baovao manaraka dia ho fampahalalana momba ny tantaram-piainan'ny vorona. Nanomboka nanangona fampahalalana momba ny habe aho, ny fotoam-piotazana, ny taham-pahafatesana, sns., Indrindra fa ireo vorona Amerikana Avaratra, saingy mbola lavitra ny lalana handehanana amin'ny karazam-borona rehetra. Ny fampahalalana rehetra izay azonao omena ny fiainana - dia ho ankasitrahana tanteraka.
Translations: Ity tranonkala ity dia efa misy amin'ny fiteny maromaro, ary tiako foana ny manampy ireo vaovao. Raha mahaliana anao ny manolotra fandikan-teny vaovao, azoko alefako ny rakitra Excel izay misy ny lahatsoratra an'ity tranonkala ity (eo ho eo 6000 words). Mitady hatrany ny synonyms amin'ny vorona amin'ny fiteny hafa aho.
Tiako ny misaotra ny rehetra izay nanampy ahy hanangana Avibase nandritra ny taona maro. Na dia nanao ny ezaka rehetra aza aho mba hampidirana ny anaran'ireo rehetra nanampy ahy tao amin'ny lisitra etsy ambany, dia miala tsiny mialoha amin'ny olona rehetra izay mety hadinoko. Faly aho manampy ny anaranao raha mifandray amiko ianao. Amin'ny lafiny iray, raha tsy izany, raha tianao, tsy tianao ny anaranao ato amin'ity lisitra ity, azafady mba ampahafantaro ahy ihany koa.
* dia manondro mpandray anjara manokana izay nanome fampahalalana marobe
Avibase no notsidihina 309,782,478 nanomboka tamin'ny 24 jiona 2003. © Denis Lepage | Politika fiarovana fiainan'olona